हामी किन सपना देख्छौँ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS हामी किन सपना देख्छौँ?
हामी किन सपना देख्छौँ?
प्रायः हरेक रात हामी सपना देख्ने गछौँ । सपनामा प्रायः हामीले भोगेका कुराहरु नै देख्ने गर्छौं । तर सधैं यस्तो हुँदैन । कहिले काहीँ हामी हुनै नसक्ने कुराहरु पनि सपनामा देख्ने गछौँ ।
हामी किन सपना देख्छौँ त ? यो प्रश्न हामीले पुराना मानिसहरुलाई सोध्यौं भने रमाइलो जवाफ आउँछ । उहाँहरुका अनुसार हामी सुतेको बेलामा अर्कै संसारमा जान्छौं । यही कारणले नै गर्दा हामी सपना देख्ने गर्छौं । तर यो साँचो कुरा होइन । अहिलेसम्म पनि यो संसार बाहेक अन्य संसार रहेको कुरा पत्ता लागेको छैन ।
विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ– हामीले देख्ने सपना हाम्रो भावना र इच्छाहरुसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । केही बाहिरी कुराले हाम्रो सपनामा असर गर्छ भने त्यो हाम्रो शरीरको अवस्था मात्र हो । हामी भोकाएका छौं वा थाकेको छौं भने त्यही कुराले सपनामा असर पार्न सक्छ । उदाहरणको लागि हामी सुतिरहेको बेला हाम्रो सिरक भुइँमा झर्यो भने हामी हिमालमा हिँउ खेलिरहेको वा पानीमा भिजिरहेको सपना देख्न सक्छौँ । हामी सुतिरहेको बेला हल्लाले असर गर्यो भने पनि त्यही कुरा सपनामा देखिन पुग्छ ।
कहिले काँही हामी दिनभरि जे गर्छौं त्यो हाम्रो सपना बन्न पुग्छ । हाम्रा पुराना कुराहरु र हामीले अहिले सोचिरहेका कुराहरु पनि सपनाको सामाग्री बन्न पुग्छ । सानो बेलामा हामीलाई धेरै दन्त्यकथाहरु सुनाइने गरिन्छ । त्यही भएर धेरै स–साना बच्चाहरु परीको सपना देख्ने गर्छन् । त्यसै गरी स्कूले केटाहरु परीक्षाको बारेमा, भोको मानिसहरु खानाको बारेमा र घरबाट टाढा रहेका सिपाहीहरु आफ्नो परिवारको बारेमा सपनाहरु देख्ने गर्छन् ।
यसबारे अध्ययनको क्रममा अमेरिकाका वैज्ञानिकहरुले सुतिरहेको एउटा मानिसलाई थाहा नै नदिई उसको हातलाई रुवाले मुसार्ने काम गरेका थिए । फलस्वरुप सपनामा त्यो मानिसले कसैले उसको हातमा समाइरहेको देख्न पुगेको थियो । यो परीक्षणले पनि बाहिरी वातावरणले हाम्रो सपनामा असर गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ ।
सपनाको बारेमा अध्ययन गर्ने मानिसहरुलाई साइकोएनालाइसिस्ट (psychoanalysist) भनिन्छ । उनीहरु कै सिद्धान्तका अनुसार हामी सुतेको बेला हामीमा लजाउने प्रक्रिया पनि शिथिल हुने गर्छ । त्यही भएर हाम्रो सबै इच्छाहरु बिनाबाधा सपनको माध्यमबाट पोखिने गर्छन् । कहिले कहिले त हामीले थाहा नपाएका इच्छाहरु पनि सपनामा पोखिने गर्छन् । उनीहरुका अनुसार हामीले पूरा गर्न नसेका हाम्रा इच्छाहरु सपनाको माध्यमबाट पूरा गर्ने काम हुन्छ । हाम्रो शरीरले हाम्रो इच्छाहरुलाई सपनाको माध्यमबाट पोख्ने काम गर्छ । त्यसैले सपना हाम्रा अनगन्ती इच्छा पूरा गर्ने एक प्राकृतिक माध्यम हो ।